Isikhathi Sokugqoka Ubuso Bakho Bempi | Martech Zone
Isikhathi Sokugqoka Ubuso Bakho Bempi
NgoMgqibelo, Disemba 20, 2008 ISonto, May 29, 2016 Douglas Karr
Kunomehluko phakathi komuntu othengisayo nokusondela. Ngikholwa ukuthi ngingumuntu omkhulu umthengisi, kodwa okubi eduze. Ngiyazi ukuthi ngithengise ukuzibandakanya okuningi okukhulu, kepha angikaze ngibe yilo mfana obefuna lokho uyinki (ukusayina inkontileka). Angikujabuleli ukubuyela emuva ngosayizi wenkontileka noma ukufaka ingcindezi ethembeni lokusayina phambilini. Ngokujabulisayo, ngizungezwe ithalente emsebenzini wami abajabulela lawo mathuba.
Abavali bethu bayakwazi ukubona ngokushesha amathuba neklayenti, izinzuzo zesicelo sethu, futhi basebenzise ingcindezi edingekayo yokuqedela ukuthengisa. Lokho kungazwakala njengokukhohlisa - ngiyavuma uma bengingacabangi ukuthi siyishintsha ngempela impumelelo yamakhasimende ethu.
Sithole ukuthi ukubandakanyeka kukhulu futhi uma siqala ngokushesha, imbuyiselo yotshalomali kumakhasimende ethu ishesha kakhulu - ngakho-ke sobabili sijabule ngokuhamba kwesikhathi. Siphinde sabona okuphambene - amakhasimende ethu amancane adinga ukunakwa kakhulu futhi imiphumela ayizeli ngokushesha. Iklayenti elikhulu lingabona inani emavikini, iklayenti elincane lingathatha izinyanga.
Njengoba isisindo somnotho sesiphelele ngokuphelele, siphonswa inselelo yizinkampani ezinamadola ukuvala unyaka, kepha kufanele siphoqeleke ukuthi zisethembe ngokutshalwa kwazo. Izinkampani zikhetha ukungasebenzisi nhlobo futhi zibeke engcupheni ukukhula kunokuchitha imali nethuba lokulahlekelwa yiyo.
Yilapho udinga i- eduze. Ukusondela akunjalo usike amanani ukuthola ukudayiswa, bafaka okwabo ubuso bempi futhi uphonsele inselelo ithemba lokuvala ukuthengisa.
Kuleli sonto ngikubonile kusebenza. Kade sisebenza nethemba lokuthi ngubani ongazuza ngokuphelele kupulatifomu yethu yokubhuloga, kepha bebelokhu behudula izinyawo zabo ekusayineni. Usayizi wenkontileka uyingxenye yesabelomali sabo sonke ngakho-ke akuyona into engafanele. Imbuyiselo yotshalomali izophindeka kaningi kuneminye imizamo yabo.
Ukusondela kwethu kwagqoka okwakhe ubuso bempi futhi waya empini. Wacwaninga isu labo lamanje futhi wakhumbuza ithemba lokuthi basebevele basebenzise isikhathi esiningi namandla ezinhlelweni ezingabanikelanga miphumela… nada… nokuthi besiwumehluko. Ukusondela kushiye ingxoxo ngombuzo ofanele, "Ngabe ufisa ukuqhubeka nesu lakho elehlulekile, noma utshale imali isu lokuwina nathi?". Vala!
Kuzwakala kunzima, kepha lezi izikhathi ezinzima. Izinkampani zichitha izabelomali zazo zika-2008 njengamanje ngakho-ke ungahle ubeke ukuthi ukuthengisa kuza kuwe futhi ukwehla kwamandla emali akuyona into enkulu.
Ku-2009, kungcono ubeke impi yakho ebusweni ngoba kuzofanele ulwele amadola wesabelomali okungenzeka angabi khona nhlobo! Qiniseka ukuthi uqasha abavali - hhayi abathengisi - futhi ungaphuma ungalimele. Ithalente labasebenzi bethu bokuthengisa liyingxenye enkulu yalokho okusunduza ukukhula kwamarekhodi ethu njengamanje futhi lizosinikeza ukukhula okuqhubekayo ngonyaka we-2009.
Tags: ukuvalaibhantshi lensimbi eligcweleithembaukuxhumana kwezokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaubuso bempi
Douglas Karr Saturday, December 20, 2008 Sunday, May 29, 2016
Ingabe i-Google Cookie iyawa?
Ukumaketha eMakethe Yezakhiwo Ezinzima
Ukukhangisa Kwebhizinisi Elincane
Dec 22, 2008 ku-12: 38 AM
Mhlawumbe kungakuhle ukuthi sigqoke izikhali zomzimba ngokuseduze nobuso bempi obuzokwethusa amaklayenti. Ukuvala akudingeki kube buhlungu kwiklayenti.
Dec 22, 2008 ku-12: 49 AM
Izembatho zomzimba ngeke zisize ukuvala ukuthengisa, i-SBM! Angifuni ukuba nethemba lokuthi ngesabe noma ngesatshiswe. Ukwesaba kuyisimo sokukhubazeka - ikakhulukazi emabhizinisini.
Ngokuphambene nalokho, ngifuna baqinisekiswe. Inkinga esiyibonayo ngalo mnotho ukuthi amabhizinisi abambezela - noma ngabe kuyisifiso sabo ukuqhubekela phambili. Ukuthengisa kumele kulwe nalolo valo.
Ngiyabonga ngokwengeza engxoxweni.
Dec 22, 2008 ngo-4: 04 PM
Gosh kumnandi ukuzwa umuntu ekhuluma ngebhizinisi emhlabeni WANGEMPELA. Konke engikuzwayo yi-Twitter lokhu, ne-FriendFeed lokho, nokumaketha ngamawebhusayithi ezinkundla zokuxhumana. Ake unginike ikhefu, abaninimabhizinisi abaningi bamatasa kakhulu ku-Twitter, njengoba izinkampani ezinomkhiqizo ongazithengisa, kufanele uqonde inqubo yokuthengisa kusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye, futhi lokho kufaka ukuvala, futhi ukuvala ubuciko, lapho ngeke wesabe. Khumbula, okubi kakhulu abangake bakusho ukuthi cha, futhi lokho akusekho okusondela kuYebo !!!!
Dec 22, 2008 ngo-4: 28 PM
Ngiyabonga Preston! Uqinisile - kumayelana nokutshala izinsiza zakho ezinhle kakhulu lapho zidingeka khona kakhulu.
Dec 22, 2008 ngo-6: 08 PM
Umbuzo wami kubo bonke osomabhizinisi abakhangisa ngabo okubandakanya uSeth Godin ukuthi yini engenziwa ukumaketha umkhiqizo wakho ozofinyelela ebhizinisini elincane kuya kwaphakathi nendawo? Manje, ake ngikunikeze isizinda esincane kimi, ngisebenze Emkhakheni Wezinsizakalo Zezezimali cishe iminyaka eyi-17 e-NYC. Umsebenzi wami kwakuwukwenza imali ngokukhethekile futhi ngiyiphathe. Ngiphakamise izigidi eziphethwe ngezindlela ezimbili: Izingqungquthela zokubamba zabatshalizimali ngazinye, nabaphathi ababandayo bezinkampani ezithengiswa esidlangalaleni. I-akhawunti yami enkulu kwakungu-45 mil… akukho ukudlala. Manje, nginenkampani yokwakha iwebhu eklama amasayithi abiza cishe u- $ 3,000 nangaphezulu. Yini engaba iseluleko esizongenza ngihlangane futhi ngivale abaninimabhizinisi abaningi? Ngizamile ukukhokha ngokuchofoza ngakunye, akusizi ngalutho. Izinkundla zokuxhumana ... yebo kunjalo, yilokho engikubiza ngokuthi G kuya G (Guru kuya Guru). Ukubizwa ngamakhaza kulethe cishe wonke amakhasimende ami, ngaphandle kwezwi lomlomo. Nginike okusha okutshalayo okusha….
Dec 22, 2008 ngo-6: 14 PM
Hawu, ngicela nizithethelele nge-typo “yabo”… kufanele ibe “lapho”